डा. उप्रेन्द्र देवकोटा – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १६ गते | Friday, 29 May, 2020
वीर अस्पतालको न्युरो सर्जिकल वार्डबाट हालै मात्रै डिस्चार्ज भए १४ वर्षीय किशोर केशव तिमल्सिना । करिब १ वर्षअघिदेखि उनलाई टाउको दुख्ने, आँखाको नानी दुख्ने, बान्ता हुने, शरीर गल्ने, निद्रा लागिरहनेजस्ता समस्या देखापर्दै गयो । मकवानपुर जिल्ला मनहरि– ७ मा बस्ने केशवले करिब केही समय टाउकोको दुखाइ कम गर्ने औषधि नजिकै रहेको मेडिकलबाट ल्याएर खाइरहे । तर, उनलाई त्यसले निको भएन । केही महिनापछि तिलगंगा सामुदायिक अस्पतालमा आँखाशिविर बस्यो । उनी त्यहाँ जाँच गर्न पुगे । तर, त्यहाँ उनको रोग पत्ता लागेन । समय बित्दै जाँदा उनलाई झन् पीडा हुन थाल्यो ।
अहिले उनी ती दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘कहीले काहीँ त अब मर्छु जस्तो लाग्थो । टाउकोको पीडा सहन नसकेर रुने गर्थें ।’ दसैँको वेला भएकाले परिवारले दसैँ सकिएपछि मात्र चेकजाँचका लागि काठमाडौं जाने निधो गरे । दसैँ सकिएपछि उनी ५ कात्तिकमा काठमाडौंमा रहेको नेपाल मोडल अस्पतालमा भर्ना भए । चेकजाँचपछि उनको रोग पत्ता लाग्यो । उनको ब्रेनमा ठूलो ट्युमर रहेछ । उपचार गर्दै जाँदा उनको टाउकोमा भएको पानी सुकाउन पेटमा पाइप राखियो । मोडल अस्पतालमा उनको उपचार भयाे । करिब २५ दिन मोडलमा उपचार गर्दा ३ लाखभन्दा बढी खर्च भएको बताउँछन्, उनका आफन्त कमल लामा ।
घर–परिवारसँग भएको पैसा सकियो, तर उनको थप उपचार हुन सकेन । थप उपचारका लागि अस्पतालमा उपकरण नभएको जानकारी गराउँदै मोडल अस्पतालले वीर अस्पतालमा रेफर गर्यो । वीरमा अप्रेसनका लागि केही दिन पालो कुरेर बस्नुपर्ने भयो । केही दिन अस्पतालको बसाइपछि वीरमा टाउकोकाे ट्युमरकाे सफलतापूर्वक निकाले ।
लामाका अनुसार अप्रेसन खर्च, औषधि, खान–बस्नदेखि लिएर डाक्टरको चार्जसमेत गरेर वीरमा उनको उपचारमा जम्मा एक लाख खर्च हुन आएको छ ।
कमल लामा भन्छन्, ‘निजी अस्पतालभन्दा वीरमा धेरै सस्तो हुनेरहेछ । पहिल्यै यहाँ आएको भए यत्रो खर्च हुने थिएन र रोग पनि समयमै निको हुने थियो ।’
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरमा न्युरो सर्जरीका लागि उपकरण पर्याप्त छन् । तर, न्युरो सर्जन विशेषज्ञको कमीले गर्दा बिरामीले उपचारका लागि केही समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
वीरमा न्युरो सर्जरी सेवा सुरु भएको करिब ६० वर्ष पुगिसकेको बताउँछन्, न्युरो सर्जन प्रमुख डा. राजीव झा । नेपालमा पहिलोपटक ब्रेनको अप्रेसन डा. दिनेशनाथ गंगोलले गरेका थिए । त्यसपछि वि.सं. २०४६ मा डा. उप्रेन्द्र देवकोटाले वीरमा न्युरो सर्जरी युनिटको स्थापना गरे । न्युरो सर्जन झा भन्छन्, ‘वीरमा न्युरो सर्जरीका सबै अप्रेसन देवकोटाबाटै भएका थिए । देवकोटाकै देनबाट आज न्युरो सर्जरी फस्टाइरहेको छ । उनले देखाएको मार्गबाटै अझै राम्रो गुणस्तरीय उपचार सेवा दिने काम भइरहेको छ ।’
निजीमा भन्दा १५ गुना सस्तो, शून्य शुल्कमा पनि हुन्छ उपचार, गुणस्तरमा पनि अगाडि
न्युरो सर्जरीसम्बन्धी उपचार गराउँदा निजी अस्पतालको तुलनामा वीरमा १५ गुनासम्म सस्तो पर्न आउँछ । अस्पतालका अनुसार न्युरोसम्बन्धी अप्रेसन गराएबापत वीरमा बिरामीले ७ हजारसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । वार्डमा बस्दा प्रतिदिन सय रूपैयाँ र भेन्टिलेटर सेवा लिएबापत ७ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, कत्ति पनि पैसा नहुनेका लागि सबैखाले शुल्क मिनाहा गरेर उपचार गराउने व्यवस्थासमेत अस्पतालले गरेको छ ।
‘अस्पतालमा आएका कुनै पनि बिरामीले पैसाकै अभावमा उपचार नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था छैन,’ डा. झा भन्छन्, ‘बिरामीसँग पैसा छैन भने अस्पतालमा लाग्ने सबै चार्ज मिनाहा गरेर पनि उपचार गरेर पठाउने गरेका छौँ ।’
वीरजस्ता अस्पतालमा उपलब्ध सुलभ सेवाकै कारण निम्न तथा मध्यमवर्गीय नेपालीको न्युरो सर्जरीमा पहुँच पुगेको छ । वीरमा सेवा उपलब्ध नहुने हो भने न्युरो सर्जरीसम्बन्धी रोग लागेका सर्वसाधारणले पैसाकै अभावमा मुत्यु कुर्नुबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन ।
सस्तो र सुलभ मात्र होइन, गुणस्तरका हिसाबले पनि वीरको न्युरो सर्जरी सेवा नेपालमै अब्बल छ । वीरको सेवा देशका अत्यधिक महँगा निजी अस्पतालको भन्दा कुनै हिसाबले पनि कम छैन । न्युरो सर्जरीका जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रविधि र उपकरण वीर र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपलब्ध छन् ।
वीरमा न्युरो सर्जरी सेवा सुरु भएको करिब ६० वर्ष पुगिसकेको बताउँछन्, न्युरो सर्जन प्रमुख डा. राजीव झा । नेपालमा पहिलोपटक ब्रेनको अप्रेसन डा. दिनेशनाथ गंगोलले गरेका थिए । त्यसपछि वि.सं. २०४६ मा डा. उप्रेन्द्र देवकोटाले वीरमा न्युरो सर्जरी युनिटको स्थापना गरे ।
वीर अस्पतालमा न्युरो सर्जरीका महत्वपूर्ण उपकरण
न्युरो नार्विकेसन स्टिम
न्युरो फिजिओ मोनोटरी
डा. प्रकाश बिष्ट विभागीय प्रमुख न्यूरोसर्जरी विभाग
उपकरण पर्याप्त, तर विशेषज्ञ अभावले समस्या
तर, पर्याप्त मात्रामा उपकरण उपलब्ध भएर पनि विशेषज्ञ न्युरो सर्जनको कमीले बिरामीलाई समयमै उपचार दिन समस्या भइरहेको डा. झाको भनाइ छ । हाल वीर र ट्रमा सेन्टरमा जम्मा ५ जना न्युरो सर्जन उपलब्ध छन् भने न्युरो सर्जरी पढिरहेका ९ जना इन्टर्न चिकित्सक बिरामीको उपचारमा खटिरहेका छन् ।
वीरबाट प्रतिमहिना ७०–८० जनाले न्युरो सर्जरी सेवा लिने गरेका छन्, जसमध्ये १५ देखि २० जना बिरामीले विशेषज्ञ अभावकै कारण पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दक्ष जनशक्ति नभएको कारण उपकरण चलाउनै समस्या भएको न्युरो सर्जन डा. प्रकाश विष्ट बताउँछन् । संसारको टेन्ड्रलाई हेर्ने हो भने एक न्युरो सर्जनले एक वर्षमा १ सय ५० बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा एक न्युरो सर्जनले एक वर्षमा ३ सयभन्दा बढी बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपरेको डा. विष्टको भनाइ छ । बिरामीको चापलाई हेर्दा तीनजना विशेषज्ञ र तिनलाई सहयोग गर्ने ६ जना डाक्टर अपुग छ ।
देशभर अहिले लगभग ८० जना न्युरो विशेषज्ञ उपलब्ध छन् । त्यसमध्ये वीर र ट्रमामा गरी ३ जना विशेषज्ञ दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने २ जनाले वीरको आन्तरिक स्रोतबाट तलब लिएर काम गरिरहेका छन् ।
विगतमा १८–२० घण्टा लाग्ने अप्रेसन ३ घण्टामा
सीप, प्रविधिमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन आएका कारण पहिला १८–२० घण्टा लाग्ने अप्रेसन अहिले प्रविधिका माध्यमले ३ घण्टामा सकिने भएको छ । हाल दिनमा ४ वटासम्म बिरामीको अप्रेसन हुने गरेको डा. झा बताउँछन् ।
वीरमा दुर्घटनामा परेका, नसा फुटेका, रगत जमेका बिरामी धेरै आउने गरेका छन् । नसारोगको सर्जरीलाई न्युरो सर्जरी भन्न सकिन्छ । त्यो नसा शरीरको जुनसुकै भागमा, मुख्यतः ब्रेनदेखि दिएर मेरुदण्डसम्म पाइन्छ ।
वीरमा न्युरो सर्जिकल वार्डमा ५० वटा बेड छन् भने आइसियूमा न्युरोका लागि ५ वटा बेड छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ४० वटा न्युरो सर्जिकल बेड छन् भने आइसियूमा १२ वटा बेड छन् । साधारण बिरामी (माएलहेडइजुरी) ७० प्रतिशत, मध्यमखाले (मोडेट) बिरामी १८ प्रतिशत, १२ प्रतिशत कोमा गएका अथवा सिबिएर भएका बिरामी थिए ।
विशिष्टीकृत गर्नु आवश्यक
समयको परिवर्तनसँगै न्युरो सर्जरीलाई पनि विशिष्टीकृत गरेर लानुपर्ने डा. झा बताउँछन् । उनका अनुसार न्युरोसर्जरीभित्र पनि रोगको प्रकृतिअनुसार फरक समस्याका लागि फरक विशेषज्ञ उत्पादन र निर्धारण गरिनुपर्छ ।
‘कुनै डाक्टरले न्युरो सर्जरी पढेर आएपछि बच्चाको मात्र न्युरो सर्जरी गरोस्, त्यसैगरी चोट–पटक लागेका बिरामीका लागि छुट्टै डाक्टर होस्, एउटाले नसा फुटेर आएका बिरामी मात्र हेरोस्, जन्मजात रोग भएका बिरामीको अप्रेसन गर्ने छुट्टै डाक्टर होस्,’ उनी भन्छन्, ‘यसो भएमा बिरामीले राम्रो र गुणस्तरीय उपचार पाउँछन् ।’ नेपालमा हालसम्म यस्तो छुट्टाछुट्टै विधा हेर्न न्युरो सर्जनहरू उपलब्ध छैनन् ।
उपचारमा उपकरणको प्रयोग
डा. झाका अनुसार अप्रेसन गर्दागर्दै कति ट्युमर वा रगत बाँकी रहेको छ भनेर हेर्न इन्ट्राअपसिटी स्क्यानले सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैगरी, राम्रो माइक्रोस्कोपले बिरामीका नसाहरू देखाउँछ र नसाको अप्रेसन कतिहदसम्म पूरा भयो वा भएन भनी (एन्जिओग्राम) हेर्न सकिन्छ ।
न्युरो नार्बिकेसन स्टिममा टाउकोको माथिल्लो भागबाट हेरेर कुन ठाउँमा ट्युमर छ भनी हेर्न सकिन्छ । जति ठाउँमा देखिएको छ, त्यहाँ मात्र अप्रेसन गरेर बाँकी भए–नभएको हेर्न सकिन्छ ।
इन्ट्रोस्कपको सहायताले टाउकोभित्र रहेको रगत, ट्युमर निकाल्न सकिन्छ । त्यसैगरी, सिटियोट्रक्यासीले अप्रेसन गर्नुपर्ने भागलाई देखाउने गर्छ । न्युरो फिजिओ मोनोटरीले टाउकोदेखि मेरुदण्डको भागमा भएका सबै नसा अप्रेसन गर्दा छोयो भने मेसिन बज्न थाल्छ र अप्रेसन गर्दा संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
वीर र ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत न्युरो विशेषज्ञ
प्रा.डा. प्रकाश विष्ट, न्युरो सर्जन प्रमुख, वीर अस्पताल
प्रा.डा. राजीव झा, न्युरो सर्जन प्रमुख/एकाइ युनिट इन्चार्ज, ट्रमा सेन्टर
डा. निमल खड्का, कलन्सेन्ट्रड न्युरो सर्जन
डा. राजेन्द्र श्रेष्ठ
डा. विकेश खम्बू
वीरमा न्युरो सर्जरीका बिरामीको चाप
वीरको ४ वार्षको तथ्यांकअनुसार न्युरो सर्जरीका सेवाग्राहीको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ । ०७१ मा वीरमा ६ हजार २ सय ५६ जनाले ओपिडीमा भर्ना भएर सेवा लिएका थिए । उक्त वर्षमा ६ सय २ जनाले न्युरो सर्जरी गराएका थिए ।
त्यसैगरी, ०७२ मा ५ हजार ३ सय ९४ बिरामीले ओपिडी सेवा लिएकोमा ५ सय १० जनाले अप्रेसन गराएका थिए । ०७३ मा ६ हजार ६ सय ५६ जनाले ओपिडी सेवा लिएका थिए, त्यसमध्ये ३ सय ८४ ले अप्रेसन सेवा लिएका थिए ।
०७४ मा ६ हजार ७ सय ७३ जनाले ओपिडी सेवा लिएकोमा ६ सय २९ जनाले अप्रेसन सेवा लिएका थिए । यो ४ वर्षमा ८ सय ४ बिरामीले न्युरो सर्जरीसम्बन्धी आकस्मिक सेवा लिएको अस्पतालको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पछिल्ला ३ वर्षमा न्युरो सर्जरीको उपचारका क्रममा ४५ जनाको मुत्यु भएको छ भने ३५ जना कोमामा छन् ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पछिल्ला ३ वर्षमा न्युरो सर्जरीका ८ हजार ५ सय २६ बिरामीले ओपिडी सेवा लिएका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ७० जनाले भर्ना भएर उपचार गराएका छन् । यसमध्ये ५५ प्रतिशत दुर्घटनामा परेका, ३६ प्रतिशत लडेका, ६ प्रतिशत चोट–पटक लागेका र ३ प्रतिशत अन्य समस्या भएका बिरामी थिए ।
ट्रमामा उपचार गराउने न्युरो सर्जरीका बिरामीमध्ये ३० प्रतिशतको अप्रेसनमार्फत उपचार गरिएको थियो भने ७० प्रतिशत बिरामीको उपचार अप्रेसनविनै सम्भव भएको थियो । पछिल्ला ३ वर्षमा ४५ जनाको उपचारका क्रममा मुत्यु भएको छ भने ३५ जना बिरामी कोमामा पुगेका छन् । यस अवधिमा ९ सय ६५ बिरामीको चामत्कारिक उपचार भएको छ ।
वीरमा न्युरो सर्जिकल वार्डमा ४० वटा बेड छन् भने आइसियूमा न्युरोका लागि ५ वटा बेड छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५० वटा न्युरो सर्जिकल बेड छन् भने आइसियूमा १२ वटा बेड छन् । साधारण बिरामी (माएलहेडइजुरी) ७० प्रतिशत, मध्यमखाले (मोडेट) बिरामी १८ प्रतिशत, १२ प्रतिशत कोमा गएका अथवा सिबिएर भएका बिरामी थिए ।
Posted in उपचार, फिचर, मुख्य खबरTagged डा. उप्रेन्द्र देवकोटा, डा. प्रकाश विष्ट, डा. राजीव झा, न्युरो सर्जरी, वीर अस्पतालLeaveaComment on न्युरो सर्जरीमा वीरको सेवा देशभरमै अब्बल, निजीमा भन्दा १५ गुना सस्तो, शून्य शुल्कमा पनि हुन्छ उपचार